Madaxweyne Caalinka Galmudug oo soo dhaweeyay go’aankii Maxkamada Maamul goboleedkaasi – SBC
Madaxweyne Caalinka Galmudug oo soo dhaweeyay go’aankii Maxkamada Maamul goboleedkaasi
Madaxweyne Caalinka dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay dib ugu laabashada kursigiisii Madaxweyne nimo, ka dib markii dhowaan khilaafaad jiray awgeed uu uga maqnaa .
Shalay gelinkii dambe ayay ku dhawaaqday maxkamada sare ee maamulkasi gaar ahaan gudoomiyaha Maxkamada sare ee Galmudug Mr Ilka dahab in uu shaqadiisa wadan karo madaxweynaha maamulka Galmudug Mr Maxamed Axmed Caalin, ka dib marki ay sameeyeen baaritaano xoogleh kuna waayeen dembiyada ay ku soo eedeeyeen qaar ka mid ah golaha Baarlamanka Maamulkaasi.
Madaxweynaha ayaa sheegay xili uu la hadlayay xafiiska SBC international ee Gaalkacyo in uu soo dhaweynayo go’aanka ka soo baxay Maxkamada Galmudug islamarkaana uu halkiisii ka sii wadan doono howlaha xafiiskiisa oo uu u hayo umada reer Galmudug.
“Waxay aheyd wax laga xumaado waxyaabihii ay ku dhaqmeen qaar ka mid ah golaha Baarlamanka galmudug, balse waxaa ka daba yimid xaqiiqadii” waxaa sidaasi yiri mid ka mid ah Shacabka reer Galmudug oo soo dhaweeyay go’aanka ka soo baxay Maxkamada Galmudug ee Madaxweyne Caalin dib loogu celinayo shaqadii xafiiska Madaxweyne nimo ee ay dhowaan carqaladeeyeen qaar ka mid ah golaha wakiilada mamulkaas.
Waxaa muuqday khilaafaad umada reer Galmudug qal qal gelin karay balse waxay u muuqataa in arinkaasi laga gudbayo ka dib wada hadalo iyana dhankooda ay ka wadeen qeybaha kala gedisan ee waxgaradka iyo Odayaasha gobolka.
Ugu dambweyntii Bishan horaanteeteedii ayay aheyd markii ay xubno ka tirsan golaha Baarlamanka Galmudug ay saxaafada ku shaaciyeen in ay kursiga madaxweyne nimo ka qaadeen madaxweynaha Maamulkaasi Mr Caalin iyagoona u jeediyay eedeymo sida maxkamadu sheegtay aan jagada loogaga qaadi Karin.
Diseenbar 9, 2011 at 9:23 pm